धारा छुन नदिएपछि क्वारेन्टाइनबाट नदीमा नुहाउन गएका युवकको बेपत्ता, शव पनि भेटियो ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/धारा छुन नदिएपछि क्वारेन्टाइनबाट नदीमा नुहाउन गएका युवकको बेपत्ता, शव पनि भेटियो !
बेनी : नुहाउने क्रममा म्याग्दी नदीमा बेपत्ता भएका क्वारेन्टाइनमा बसेका युवाको ६ दिनपछि शव फेला परेको छ। मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङको छ्यारछ्यारेस्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका धवलागिरी गाउँपालिका–७ धारापानीका १९ वर्षीय राजेश थापा जेठ २० गते बेपत्ता भएका थिए। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ
थापाको शव आइतबार दरवाङ्कै बाङ्गेपहिरो स्थित म्याग्दी नदी किनारमा फेला परेको मालिका–६ का वडा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले जानकारी दिए। स्थानीयबासीले धारामा नुहाउन नदिएपछि म्याग्दी नदीमा नुहाउन गएका थापा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका थिए। भारतबाट आएर बेनीको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि दरवाङ सारिएको थियो।
थापाको शव परीक्षणका लागि बेनीस्थित अस्पतालमा ल्याउने तयारी भएको छ। उनको खोजीमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरको टोली समेत ल्याए पनि सफल भएका थिएनन्। थापा छ महिनाअघि रोजगारीका लागि भारत गएका थिए। कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमेपछि भारतीय सिमानामा आएका उनलाई उद्दार गरेर बेनी ल्याइएको छ।
क्वारेन्टाइन स्थापना भएको जनप्रिय माविको भवनमा घेराबार छैन्। आफन्तले भने कमजोर सुरक्षा र व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण उनको ज्यान गएको बताएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालसहितका सुरक्षा अधिकारीले छ्यारछ्यारेको क्वारेन्टाइनलाई २० गते नै दरवाङको उपल्लो बजारमा रहेका जनप्रिय माविको भवनमा सारेका थिए। हालसम्म म्याग्दीका १७९ जनाको स्वाब संकलन गरेर पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न पोखरास्थित प्रयोगशालामा पठाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।